Mbola trosa ihany fa tsy omena fotsiny ilay famatsiam-bola nampanantenain�ireo mpamatsy vola nivory tany Paris ny fiandohan�ny herinandro teo sady tsy misy tombontsoa ho an�ny vahoaka Malagasy velively,
hoy Rakotonirina Odon, filohan’ny Antoko Aro Riaka. Hanaporofo izany ny tsy fahazoan’ny Malagasy io famatsiam-bola io ankoatra ireo mpandraharaha frantsay toa an’ny Filatex…, tranga izay nambarany fa efa tsy mahagaga intsony eto amintsika. Tanjon’ny Frantsay amin’ny fanatanterahana izany ny mba hahafahany mamahatra amin’ireo tany nozanahany toa antsika eto Madagasikara hahafahany manakona ny fahalemeny. Nambaran’ity filohan’ny antoko Aro Riaka ity hatrany moa fa diso ny filazana fa fa fitoniana ara-politika fotsiny ihany no fepetra takiana amin’ny fahazoana io vola. Mbola betsaka ny fepetra hafa hoy izy toy ny hoe : tsy maintsy frantsay no hitantana ny orinasa…Mikasika ny nosy Malagasy izay mbola hotakian’ity antoko iray ity hatrany moa dia nambarany fa fotoana tokony ho nitakiana izany tamin’ny filoha Frantsay Fançois Hollande ny fandraisantsika ny frankofonia farany teo saingy tsy nataon’ny filoha ankehitriny izany na dia efa fantany aza fa tsy hilatsaka hofidiana intsony ity filoham-pirenena Frantsay ity.